> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiraa Motorola Droid Razr
Dr.Fone U android waa software ugu fiican ee suuqa ee soo kabsaday xogta la tirtiro ama laga badiyay ku saabsan qalabka Android sida Droid Motorola ee Razr. Mid ka mid ah qaababka ay waa inuu ka soo kabsado xiriir la tirtiro. Haddii aad rabto in badan oo ku saabsan WonderShare Dr.Fone for Android ogahay, fadlan guji xidhiidhinta this: Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) . Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa version maxkamad of software ah oo tijaabi. Xilligan la joogo, Dr.Fone u android waa kaliya version daaqadaha ah.
By ka dibna, waxaad arki doontaa ah pop-up aad Motorola Droid Razr codsanaya inaad u ogolaato qalab aad u noqon in hab user super. Just guji ogolow aad Motorola Droid Razr ka dibna riix on bilowga on your computer inay sii wadaan geeddi-socodka.
Tallaabada 6. Kulanka Xiisaha iyo xiriirada kabsado tirtiray
Haddii aad rabto in aad soo kabsadaan oo dhan ee aad xiriirka la leedahay, in la hubiyo in sanduuqa xiriirada ee Column hore sax oo guji badhanka soo kabsado. Haddii aad rabto in aad ku eegaan xiriirka la leedahay oo ay doortaan a xiriir gaar ah oo aad rabto inuu ka soo kabsado, fadlan sax sanduuqa ku xiga in xiriir aad rabto in aad soo kabsado guji soo kabsado.
Waxaan rajeyneynaa in this article sameeyey kaa caawin ku saabsan sida inuu ka soo kabsado tirtiray / xiriirada lumay aad on your Motorola Droid Razr. Laakiin sida aad ogtahay, sida ugu wanaagsan ee ay u fahmaan waa in la tijaabiyaa keligaa, sidaas darteed fadlan si xor ah u soo bixi version maxkamadda adigoo riixaya batanka download hoos ku qoran.